NSAIDs को सूची: प्रयोग, साधारण ब्रान्ड, र सुरक्षा जानकारी - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य कम्पनी, समाचार कल्याण समाचार, कल्याण चेकआउट समुदाय कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कल्याण समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, समाचार औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समाचार
मुख्य >> औषधि जानकारी >> NSAIDs के हुन्?
NSAIDs के हुन्?
NSAID सूची | NSAIDs के हुन्? | कसरी उनीहरू काम गर्छन् | उपयोगहरु | NSAIDs कसले लिन सक्छ? | सुरक्षा | साइड इफेक्ट | लागत
यदि तपाईंले कुनै पनि प्रकारको दुखाइ वा सूजन अनुभव गर्नुभयो भने, सम्भावितता तपाईंले छोटो अवधिको दुखाइ राहत (एनाल्जेसिक प्रभाव) को लागी NSAID औषधि लिनुभएको छ। एनएसएआईडीहरू गैर-ईन्टर-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हुन्। बच्चाहरू र वयस्कहरूमा प्रयोग, तिनीहरू धेरै बिरामीहरूलाई मद्दत गर्दछन् जसले पीडा वा सूजन निम्त्याउन सक्छ। NSAIDs को बारेमा सबै जान्नको लागि पढ्नुहोस् common सामान्य ब्रान्ड नाम, प्रयोगहरू, र सुरक्षा जानकारी सहित। यस चार्टले सब भन्दा सामान्य NSAIDs र मूल्य निर्धारण जानकारी सूचीबद्ध गर्दछ।
NSAIDs को सूची
ब्रान्ड नाम (सामान्य नाम) जेनेरिकको औसत नगद मूल्य एकलकेयर मूल्य अझै सिक
एडभिल, मोट्रिन (आइबुप्रोफेन) * 30 per० प्रति ,०, mg०० मिलीग्राम ट्याब्लेट आइबुप्रोफेन कूपनहरू पाउनुहोस् Ibuprofen विवरण
एलेभ, एनाप्रोक्स, एनाप्रोक्स डीएस, नेप्रोसिन, नेप्रेलन (नेप्रोक्सेन) * 30 per$ प्रति ,००, mg०० मिलीग्राम ट्याब्लेट नेप्रोक्सेन कुपनहरू पाउनुहोस् नेप्रोक्सेन विवरणहरू
सेलेब्रेक्स (सेलेक्सोक्सिब) 30 for०, २०० मिलीग्राम क्याप्सूलको लागि सेलेब्रेक्स कूपन पाउनुहोस् सेलेब्रेक्स विवरणहरू
क्लीनोरिल (सलिन्ड्याक) 60 ,०, २०० मिलीग्राम ट्याब्लेटका लागि क्लिनोरिल कुपन प्राप्त गर्नुहोस् क्लिनोरिल विवरण
Feldene (piroxicam) 30 १33 को लागि ,०, १० मिलीग्राम क्याप्सूल Feldene कूपन प्राप्त गर्नुहोस् Feldene विवरण
इंडोसिन (इंडोमेथेसिन) 30 for०, mg० मिलीग्राम क्याप्सूलको लागि इंडोकिन कुपन पाउनुहोस् इंडोकिन विवरणहरू
लोडिन (एटोडोलाक) 60 for०, mg०० मिलीग्राम ट्याब्लेटका लागि Lodine कुपन प्राप्त गर्नुहोस् Lodine विवरण
मोबिक (मेलोक्सियम) 30 for० को लागि २१०, १ mg मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू मोबिक कुपन पाउनुहोस् मोबिक विवरणहरू
ओरुडिस (किटोप्रोफेन) 30 for० को लागि ,२, mg 75 मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू Orudis कुपन प्राप्त गर्नुहोस् Orudis विवरण
Relafen (nabumetone) 60 ,०, mg०० मिलीग्राम ट्याब्लेटका लागि Relafen कुपन प्राप्त गर्नुहोस् विवरण पुनः देखाउनुहोस्
टोराडोल (केटोरोलाक) २०, १० मिलीग्राम ट्याब्लेटका लागि १२7 डलर Toradol कुपन प्राप्त गर्नुहोस् Toradol विवरण
भोल्टारेन, भोल्टारेन-एक्सआर (डिक्लोफेनाक सोडियम, मौखिक) 30 for०, mg० मिलीग्राम ट्याब्लेटका लागि २$ डलर भोल्टारेन (मौखिक) कुपन पाउनुहोस् Voltaren (मौखिक) विवरण
भोल्टारेन जेल (डिक्लोफेनाक, सामयिक) * १०० ग्राम ट्यूबको लागि $ .२ भोल्टारेन (सामयिक) कुपन पाउनुहोस् Voltaren (सामयिक) विवरण
* प्रिस्क्रिप्शन र OTC फॉर्मूलेशनमा उपलब्ध छन्
अन्य NSAIDs लाई समावेश गर्दछ:
आर्थ्रोटेक (डिक्लोफेनाक / मिसोप्रोस्टोल)
Cataflam (diclofenac पोटेशियम)
फ्लेक्टर (डिक्लोफेनाक सामयिक)
पेनसाइड (डिक्लोफेनाक सामयिक)
पोन्स्टेल (मेफेनमिक एसिड)
सोलाराजे (डिक्लोफेनाक सामयिक)
जिप्सर (डिक्लोफेनाक पोटेशियम)
नन्स्टेरॉइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रगहरू लोकप्रिय औषधी हो जसले पीडा र सूजनको उपचार विभिन्न प्रकारका गठिया, पीठ दुख्ने, र टाउको दुख्ने जस्ता उपचारबाट गर्दछ। ती ज्वरोलाई कम गर्न पनि मद्दत गर्दछन् यद्यपि त्यहाँ धेरै प्रिस्क्रिप्शन एनएसएआईडीहरू छन्, केहि एस्पिरिन र आईबुप्रोफेन जस्तो ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) उपलब्ध छन्।
नोट गर्नुहोस् कि टाईलेनल, जसमा एसिटामिनोफेन हुन्छ, प्राय: यी औषधीहरूको साथ उल्लेख गरिएको छ, तर Tylenol NSAID हैन।
स्याउ साइडर सिरका खमीर संक्रमण को लागी प्रयोग गर्नुहोस्
NSAIDs कसरी काम गर्छ?
एनएसएआईडीहरू COX-1 र COX-2 भनिने एन्जाइमहरू रोक्न काम गर्दछ। COX भनेको साइक्लोक्सीजेनेस हो। यी एन्जाइमहरूले प्रोस्टाग्लैन्डिनहरू बनाउँदछन्, जसले पीडा र सूजन निम्त्याउँछ यी एन्जाइमहरू अवरुद्ध गरेर, तपाईंको शरीरले कम प्रोस्टाग्लैन्डिनहरू उत्पादन गर्दछ, कम पीडा र सूजनको कारण। ( सेलेब्रेक्स एक NSAID एक COX-2 अवरोधकर्ता हो। केवल COX-2 लाई अवरुद्ध गर्दा, पेटमा कम प्रतिकूल प्रभावहरू हुन सक्छन्।)
एनएसएआईडीहरू प्रभावकारी हुन्छन् र प्रायः दुखाइ नियन्त्रण गर्न सक्दछन्, बिरामीहरूलाई ओपीओइडजस्ता कडा औषधि सेवन गर्नबाट जोगाउँछन्, जसको अधिक गम्भीर साइड इफेक्टहरू र दुरुपयोग र निर्भरताका लागि उच्च सम्भावना हुन्छ।
जब तपाईंसँग हल्कादेखि मध्यम दुखाइ वा सूजन छ कि NSAID को आवश्यक छ, अन्य उपायहरूले पनि सहयोग गर्न सक्दछ। बरफ वा तातो, शारीरिक उपचार, र आराम जस्ता अन्य दुखाइ व्यवस्थापन युक्तिहरूमा चिकित्सा मार्गदर्शनको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस्।
NSAIDs के को लागी प्रयोग गरीन्छ?
NSAIDs विभिन्न अवस्थाका लागि उपयोगी छ जुन हल्का देखि मध्यम दुखाइ र सूजन निम्त्याउँछ, जस्तै:
खेल चोट / sprains
मासिक पेटका ऐंठन
विशिष्ट संकेत उत्पादनहरु बीच फरक छ, चिकित्सा सल्लाह को लागी तपाइँको स्वास्थ्यसेवा पेशेवर मा सोध्नुहोस् कुन दर्द निवारक तपाइँको अवस्था को लागी राम्रो हुनेछ।
NSAIDs कसले लिन सक्छ?
प्रायः वयस्क पुरुषहरूले NSAID लिन सक्दछन् जबसम्म तिनीहरू मुनि कुनै प्रतिबन्धित समूह मुनि गिरदैनन्।
अधिकांश वयस्क महिलाहरूले NSAID लिन सक्दछन् जबसम्म तिनीहरू तल सूचीकृत प्रतिबन्धित कोटीमा पर्दैनन्। गर्भवती महिलाहरूले गर्भावस्थाको तेस्रो तिमाहीमा एनएसएआईडी लिनु हुँदैन किनभने उनीहरूले एउटा अजन्मे बच्चालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ।
केहि गैर-सदस्यता एनएसएआईडीहरू, जस्तै एडविल र मोट्रिन, months महिना भन्दा ठूलो बच्चाहरूको लागि उपलब्ध छन्, तर तपाइँको बाल रोग विशेषज्ञ वा फार्मासिष्टको साथ उचित खुराक जाँच गर्न नबिर्सनुहोस्। Dosing फरक हुन्छ गठन, उमेर, र वजन द्वारा। केहि फॉर्म्युलेसनहरू अधिक केन्द्रित हुन्छन्, जसको अर्थ हुन्छ कि बच्चाले थोरै मात्रामा थप औषधि पाउनेछ। यसैले यो पढ्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ औषधि तथ्य लेबल विशेष उत्पादनको लागि, र तपाईंको स्वास्थ्य प्रदायकसँग डबल-जाँच गर्नुहोस् यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न। उचित खुराक मापन गर्न डोजि cup कप वा मौखिक सिरि use प्रयोग गर्नुहोस्। भान्सा मापन चम्मच को उपयोग नगर्नुहोस्, किनकि यो औषधि नाप्नका लागि गलत हुन सक्छ।
यद्यपि एलेभ ओटीसी उपलब्ध छ, यो १२ बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूमा प्रयोग हुनुहुन्न।
प्रिस्क्रिप्शन NSAIDs उमेर र संकेतहरूको सर्तमा फरक पर्दछ, त्यसैले यदि तपाईंको प्रश्नहरू छन् भने आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस्।
एनएसएआईडीहरू यसमा छन् बियर सूची उमेर वयस्कहरूको लागि सम्भावित अनुपयुक्त औषधिहरूको। 75 75 बर्ष भन्दा पुरानो उमेरका मानिसहरूमा पेटमा रगत वा अल्सरको उच्च जोखिम हुन्छ। प्रिलोसेक जस्ता प्रोटोन पम्प इनहिबिटर लिनाले पेटमा प्रभावको जोखिम कम गर्न सक्छ, तर जोखिमलाई हटाउँदैन। उमेर वयस्कहरूले NSAIDs लाई पनि बेवास्ता गर्नु पर्दछ मुटुको विफलता, तरल पदार्थ प्रतिधारण, र मृगौला बिग्रने जोखिमको कारण।
NSAIDs सुरक्षित छन्?
यदि NSAIDS लिनुहोस्:
तपाइँ ह्या hang्गओभर को लागी के लिन सक्नुहुन्छ
कुनै पनि NSAIDs बाट एलर्जी छ।
दम वा एस्पिरिन वा अन्य NSAIDs बाट एलर्जी प्रतिक्रियाको इतिहास छ।
CABG शल्यक्रिया (वा भर्खरैमा भएको) को बारे मा छन्।
गर्भावस्थाको तेस्रो तिमाहीमा छन्। यदि तपाईं पहिलो वा दोस्रो त्रैमासिकमा हुनुहुन्छ, वा यदि तपाईं स्तनपान गराइरहनुभएको छ भने, स्वास्थ्यसेवा पेशेवरलाई चिकित्सा सल्लाह लिन सोध्नुहोस्।
सबै NSAIDs को एक छ कालो बक्स चेतावनी । कालो बक्स चेतावनी सबैभन्दा गम्भीर चेतावनी हो जुन एफडीए (संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन) द्वारा आवश्यक छ। यो चेतावनी समावेश:
हृदय जोखिम : एनएसएआईडीले रगतको थक्का, हृदयघात, र स्ट्रोकको जोखिम बढाउँदछ, जुन घातक हुन सक्छ। जोखिम उपचारको शुरुमा देखा पर्दछ, र जोखिम बढि लामो समयसम्म औषधीको प्रयोग गरिन्छ। NSAIDs कोरोनरी धमनी बाइपास ग्राफ्ट (CABG) शल्यक्रिया अघि वा पछाडि प्रयोग गरिनु हुँदैन।
जठरांत्र (GI) जोखिम : एनएसएआईडीले रक्तस्राव, पेटको अस्तर / अल्सरको जलन, र पेट र आन्द्राको छिद्र बढाउने जोखिमलाई बढाउँछ। यो घातक हुन सक्छ। यी GI जटिलताहरू कुनै पनि समय एनएसएआईडी प्रयोगको समयमा र चेतावनी बिना हुन सक्छ। जोखिम कारकहरूमा वृद्ध वयस्कहरू र GI रगत र / वा अल्सरको ईतिहासको साथ बिरामीहरू समावेश छन्।
अन्य चेतावनी समावेश:
दुर्लभ अवस्थामा, कलेजो समस्या हुन सक्छ। तिनीहरू गम्भीर वा घातक हुन सक्छ। तपाइँको डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस् यदि तपाइँ जस्तै मतली, थकान, खुजली, पेटको तल्लो दुख, पीलिया, वा पखाला जस्ता लक्षणहरू छन्।
उपचारको क्रममा रक्तचाप मोनिटर गरिनु पर्छ।
किनभने NSAIDs मुटुको विफलता र edema को जोखिम बढाउन को लागी, ती सामान्यतया गम्भीर हृदय असफलता भएका मानिसहरुमा टाढा रहनु पर्छ।
दीर्घकालीन प्रयोगले मिर्गौला समस्या निम्त्याउन सक्छ र सामान्यतया उन्नत मिर्गौला रोग भएका बिरामीहरूलाई वेवास्ता गर्नुपर्छ।
यदि एनाफिलाक्टिक प्रतिक्रिया देखा पर्‍यो भने आपतकालिन चिकित्सा सहायता पाउनुहोस्, जस्तै खुजली, सास फेर्न गाह्रो, वा ओठ, अनुहार र जिब्रोमा सूजन।
NSAIDs ले गम्भीर छालाको प्रतिक्रियाहरू निम्त्याउन सक्छ जस्तै स्टीभेन्स-जॉनसन सिन्ड्रोम वा विषाक्त एपिडर्मल नेक्रोलिसन (TEN)। यी घातक हुन सक्छ र चेतावनी बिना हुन सक्छ। NSAID लिन रोक्नुहोस् र आपतकालीन मद्दत प्राप्त गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग छालाको प्रतिक्रिया छ भने। NSAID न लिनुहोस् यदि तपाइँसँग NSAID मा अघिल्लो छाला प्रतिक्रिया छ भने।
NSAIDs एनीमिया पैदा गर्न सक्छ। कोर्टीकोस्टेरोइड्स, एन्टिकोआगुलेन्ट्स (जस्तै वारफेरिन), एन्टिपालेटलेट्स, वा एसएसआरआई वा एसएनआरआई एन्टिप्रेसप्रेसन्टहरू जस्तै NSAIDs बाट रक्तस्रावको जोखिम बढ्छ।
यदि तपाइँ एक लामो समय को लागी एक NSAID ले, प्रयोगशाला परीक्षणहरु को बारे मा तपाइँको डाक्टर सोध्नुहोस्। NSAIDs को साथ सम्बन्धित सबै जोखिमहरूको कारण, यो भन्दा छोटो समयको लागि सम्भवतम न्यूनतम खुराक लिन उत्तम हुन्छ। यदि तपाईं ओटीसी एनएसएआईडी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, १० दिन भन्दा बढि प्रयोग गर्नु अघि तपाईंको डाक्टरलाई सोध्नुहोस्। दीर्घकालीन पीडालाई फरक औषधि आवश्यक पर्दछ।
प्रिस्क्रिप्शन, ओटीसी, र भिटामिनसहित तपाईले लिनुहुने सबै औषधिहरूको बारे तपाईको हेल्थकेयर प्रदायकलाई बताउनुहोस्, ताकि ऊ वा उनी पक्का हुन सक्छन् कि तपाईले लिनु भएका अन्य औषधीहरु संग NSAID सुरक्षित छ। एनएसएआईडीएसले एसएसआरआई वा एसएनआरआई एन्टिडिप्रेसन्ट्स, एन्टिकोआगुलेन्ट्स, लिथियम, एसीई इनहिबिटरहरू, एआरबी, र डायरेटिक्स जस्ता केही औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ।
एनएसएआईडीहरू गर्भावस्थाको तेस्रो त्रैमासिकमा प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनकि त्यसले गर्भमा रहेको बच्चालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ।
केटोरोलाक ईन्जेक्शन रिकल (मार्च २०२०)
केटोरोलाक ईन्जेक्शन रिकल (अप्रिल २०१ 2019)
इबुप्रोफेन मौखिक रिकल (जनवरी २०१ 2019)
शिशुहरूको आइबुप्रोफेन रिकल (डिसेम्बर २०१))
Vioxx र Bextra दुबै COX-2 अवरोधकर्ताहरू थिए जुन गंभीर हृदय समस्याहरूको कारण बजारबाट हटाइएको थियो।
के तपाईं NSAIDs गर्भवती वा स्तनपानको समयमा लिन सक्नुहुन्छ?
गर्भावस्थाको तेस्रो त्रैमासिकमा NSAIDs लिनुहुन्न। यी औषधीहरूले अजन्मे बच्चालाई ज्यान जोखिम पुर्‍याउँछ। यदि तपाईं पहिलो वा दोस्रो त्रैमासिकमा हुनुहुन्छ, वा यदि तपाईंले पहिले नै एनएसएआईडी लिइरहनुभएको छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउनुहुन्छ भने, निर्देशनका लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
यदि तपाईं स्तनपान गर्दै हुनुहुन्छ भने, स्वास्थ्य सल्लाहका लागि स्वास्थ्य सल्लाहकारको सल्लाह लिनुहोस्।
NSAIDs नियन्त्रण पदार्थहरु छन्?
होईन, NSAIDs नियन्त्रणित पदार्थहरू होइनन्।
सामान्य NSAIDs साइड इफेक्ट
NSAID दुखाइ कम गर्नेहरूलाई प्रायः राम्रोसँग सहन गरिन्छ तर यसले धेरै साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ, जस मध्ये केही गम्भीर हुन सक्छ। सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टमा जीआई (जठरांत्र) साइड इफेक्टहरू जस्तै पेटको दुखाइ, कब्ज, पखाला, ग्यास, ईर्ष्या, मस्तिष्क, र बान्ता शामेल छ। अनुहार छोड्नु पनि एक साधारण पक्ष प्रभाव हो।
अन्य, गम्भीर दुष्प्रभाव हुन सक्छ। यसले समावेश गर्न सक्छ:
मुटु समस्याहरू जस्तै हार्ट अटैक, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप), वा मुटुको विफलता
मृगौला वा कलेजो समस्या
पेट र आन्द्रामा रक्तस्राव र अल्सर जस्ता GI समस्याहरू
कम रातो रक्त कोषहरू
जीवन खतरा छाला वा एलर्जी प्रतिक्रिया
दमको बिरामीहरूमा दमको हमला
यदि तपाईंसँग यी लक्षणहरू मध्ये कुनै छ भने, आपतकालीन चिकित्सा उपचार लिनुहोस्:
सास फेर्न गाह्रो वा सास फेर्न
शरीरको एक पक्षमा कमजोरी
अनुहार वा घाँटीको सूजन
तपाइँको NSAID लिन रोक्नुहोस् र तुरून्त डाक्टरलाई कल गर्नुहोस् यदि तपाइँसँग यी लक्षणहरू मध्ये कुनै छ भने:
असामान्य थकित वा कमजोर महसुस
खुजली, छालाको दाग, वा ज्वरोको छाला
छाला पहेंलो वा आँखाको सेतो
कालो, ट्यारी, वा खूनी मल
हतियार / खुट्टा / हात / खुट्टा को सूजन
यो साइड इफेक्ट को पूर्ण सूची छैन। साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
NSAIDs को कति खर्च हुन्छ?
NSAIDs स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु बीच एक लोकप्रिय विकल्प हो किनभने तिनीहरू प्रभावी मात्र होइन तर सस्तो पनि छन्। तपाईं OTC NSAIDs $ and र माथिको लागि खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, प्याकेज आकार र सूत्रमा निर्भर गर्दै। प्रिस्क्रिप्शन-सामर्थ्य NSAIDs पनि किफायती छन्, उत्पाद, शक्ति, र मात्रा अनुसार भिन्नता। तपाईं जहिले पनि नि: शुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एकलकेयर कार्ड तपाइँको NSAID प्रिस्क्रिप्सनमा पैसा बचत गर्न र वैध प्रिस्क्रिप्सन सहित OTC फारमहरू पनि।
Trulicity vs Victoza: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
आभा र गर्भनिरोधक गोलीहरूको साथ माइग्रेन: खतरनाक संयोजन?
xanax र lorazepam एउटै हो?
glipizide को लागी सामान्य नाम के हो
मेलाटोनिन ३ मिलीग्राम कति लिने
तापक्रम सेल्सियस मा ज्वरो के हो?
मधुमेह परीक्षण स्ट्रिप्स को लागत कति छ?